Haa, waxaad runtii ka heli kartaa fuuq-baxa fuuq-baxa aad u wanaagsan 35 $ - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Haa, waxaad runtii ka heli kartaa fuuq-baxa cuntada aad u wanaagsan 35 $ - BGR
Weligaa miyaad tixgelisay iibsashada fuuq-baxa fuuq-baxa, laakiin ma rabto inaad ku bixiso 100 $ ama ka badan badeecad aadan hubin? Ha walwelin, waxaan halkaan kuugu joognaa adiga. Dash waa shirkadda ka dambeysa 20 $ ukunta karinta dhakhsaha badan ee qof walbaa ku wareego, sidoo kale iyadu waxay sameysaa qalab kale oo jikada badan oo la awoodi karo. Sidaad hore u qiyaastay, tan waxaa ku jira waxyaabaha cajiibka ah Qalabka fuuq-baxa ee korantada ee jirka ka baxa fuuq-baxa DASH SmartStore taas oo ah wax lagu quudhsan karo Amazon. Waxay la imaaneysaa shan baakadood oo jajaban oo aan lahayn BPA, sidaa daraadeed waxay ku hayn kartaa dhammaan jahwareerka, miraha, geedaha iyo miraha la qalajiyey iyo khudradda aad rabto, waana 35 $ oo keliya Amazon!
Waxyaabaha soo socdaa waa qodobbada lagu calaamadeeyay bogga sheyga:  Keydinta Meel Gaarka ah ee Smart: Qalabka Smart Dehumidifier maahan mashiinka nadiifintaada caadiga ah ee qaada dhammaan meerahaaga shaqada. Si fudud u rogi weelasha xirmooyinka ee '5' oo guban kara si ay u dumiyaan, iyaga oo badbaadinaya ilaa 40% oo kayd ah, oo ka dhigaya kombuyuutar-gacmeedkan qalabka jikada ee lama huraanka ah
Caafimaad qaba: U samee waxyaabo kale oo caafimaad ah si ay u kaydiso cunnooyinka fudud ee la soo iibsado, oo aan lahayn sonkor lagu darin, taas oo ka dhigaysa carruurta u fiican - miraha, khudradda, geedaha, kalluunka, khudradda, macmacaanka miro ama maqaar miro, tufaax ama moos. , hilibka lo'da, hilibka isku-dhafka ah, maraq qallalan, ama xitaa potpourri iyo ubaxyo la qalajiyey
La-waafajin karo: 105º-165º xakameynta heerkulka u oggolaanaya miraha kala duwan, khudradda, hilibka, nuts iyo xulashooyinka kale ee caafimaad. Xirmooyinka is dulsaarka ah ee 5 ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto karti ama noocyo kala duwan oo aad u baahan tahay waqti isku mid ah; Ku habboon cuntooyinka yaryar, qoysaska waaweyn ama xafladaha
Hadiyad qumman: arooska qumman ama hadiyadda guriga cusub. Cabbirkeeda yar wuxuu qaadanayaa meel yar oo ku taal miiska dushiisa, oo qaabeyntiisa jilicsan iyo xulashooyinka midabaynta isbeddelayaa waxay dhameystirayaan heerkulka kasta ee jikada (ku dar diiwaankaaga hadda!). ku habboon guryaha hore, jikooyinka yar yar, guryaha jiifka kuleejka ama safarada kamaradaha / safarada
Waxaa ku jira: Iyada oo damaanad qaad soo saaraha sanadka soo saaraya 1, 240 Watt Intelligent Dehydrator uu la imaanayo xNUMX xarig ah, cad, weel nadiif ah, weelka bilaashka ah ee BPA, buuga cuntada iyo marin u helida keydka macluumaadka cuntada. sii kordhaya. Waxaa lagu heli karaa casaan, cawlan ama aqua
Mid ka mid ah jaakadaha korantada ee ugu fiican Amazon ayaa ka hooseeya 20 $ - BGR